Muxuu Xildhibaan Jindi walaac uga qabaa in ay dib u dhacaan doorashooyinka dalka? – Kalfadhi
Muxuu Xildhibaan Jindi walaac uga qabaa in ay dib u dhacaan doorashooyinka dalka?
Golaha shacabka Baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa bishii hore guddi u saaray diyaarinta iyo sixidda xeerka doorashooyinka dalka ee ay xukuumaddu soo gudbisay bishii Abriil.
Waa xeer muhiim u ah geedi-socodka dalka iyo doorashooyinka 2021, balse markii ay xukuumaddu soo gudbisayba waxaa walaac ka muujiyay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka qaarkood iyo daneeyayaasha siyaasadda gudaha.
Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi oo ka mid ah golaha shacabka BFS oo toddobaadkan la hadlay warbaahinta Kalfadhi ayaa mudo kororsi uga digay dowladda uu hoggaaminayo Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
“Waxaan ku talinayaa in aysan dhicin wax mudo korarsi ah” ayuu yiri Xildhibaan Jindi oo walaac ka qaba cago-jiid iyo in dib u dhac ku yimaaddo xiliga doorashoyoyinka dalka.
Mudane Jindi ayaa ka hadlay xeerka doorashooyinka ee ay xukuumaddu u soo gubisay ee loo saaray guddiga xildhibaanada ah ee ka soo shaqayn doona “Xukumaddu waxay noo keentay sharci aad u qasan oo ah i dhaafsii” ayuu yiri. Wuxuuna soo dhoweeyay guddiga loo diray shaqadda diyaarinta xeerka.
Xildhibaanku wuxuu sheegay in xeerka xukuumaddu soo gudbisay uu ahaa mid sharciga baalmarsan.
Xildhibaan Carab oo dowladda Puntland u jeediyay in ay ceelal biyoodyo gaarsiiyo deegaan doorasheedkiisa
Puntland oo qorshaysay in muddo laba bilood ka yar ay ku dhisto golayaasha toddobo degmo